USolwazi Ntombi Mtshali.
Abahlengikazi Ababhekane Ngqo nesimo: Umphumela We-COVID-19 Kubahlengikazi
‘Unyaka wezi-2020 i-World Health Organization (i-WHO) inqume ukuthi kube nguNyaka Womhlengikazi noMbelethisi. Nokho imigubho igqitshwe yinselelo engalindelwe ye-COVID-19,’ kusho uMholi Wezifundo eMkhakheni Wezobuhlengikazi uSolwazi Ntombi Mtshali kwiwebhina ebibizwa ngokuthi Nursing on the Frontlines: The Impact of COVID-19 on Nurses nebihlelwe yiloMkhakha.
‘Impi yokulwa ne-COVID-19 bekungumkhankaso wabo bonke abasebenzi, ukuqinisa ikhwelo lomhlaba wonke ukuvikela nokutshala kubasebenzi bezempilo,’ kusho yena.
Njengengxenye yomkhankaso wokubhekana nobhubhane i-COVID-19, uhulumeni uqashe abahlengikazi nababelethisi abangasebenzi nasebathatha umhlalaphansi. Ucwaningo luka-Okeahalam nabanye (lwangowezi-2020) lwaveza ukuthi ukwandisa isibalo sabahlengikazi nababelethisi emazweni ase-Afrika wonke ngaphandle kwasenyakatho kunciphisa ukubulawa yi-COVID-19 kwabantu.
Njengoba bebhekene nqo nezempilo, abahlengikazi abasindanga ekugadleni kobhubhane, ikakhulu ngenxa yokusondelana kwabo neziguli isikhathi eside. Ngokwe-WHO, zingumhla wama-23 kuNhlaba ngowezi-2021 kubikwe ukugula ngenxa ye-COVID-19 kwabasebenzi bezempilo abacela e-112 206 (ama-3.3%) kulesisifunda, iNingizimu Afrika uhhafu walesisibalo kuyiNingizimu Afrika iyodwa.
NgoNcwaba wezi-2020 iNingizimu Afrika ibineziguli ezingabasebenzi bezempilo abangama-62% abahlabekile, lapho i-14 143 (ama-52%) kade kungabahlengikazi ne-1 644 (ama-6%) kungodokotela. Ngalesosikhathi izinga lokusinda kwabasebenzi bezempilo ezweni bekungama-58%.
Ubhubhane luholele ekuphazamisekeni kokufundisa nokufunda, nokuhlinzekwa kwezinye izidingo. Izinkundla zokuxhumana ngezobuchwepheshe yizona ezenze izinto zangcono, kwathi abahlengikazi basezindaweni ezisemakhaya basebenzisa ubuchwepheshe obuphathekayo ukuhlola iziguli ezibuyayo, ukuxilonga, ukufundisa ngezempilo, ukuthatha umlando nokubheka iziguli ngaphambi kwezinsuku zokuhlolwa kwazo ukunciphisa isikhathi ezisihlala ezindaweni zokwelashwa. Baphinde bathembela ebuchwephesheni obuphathekayo ukuthola imininingwane emisha nemigomo edinga ukulandelwa ukubhekana nobhubhane.
Izimpahla zokuzivikela kwezinye izikhungo zokwelapha, ukushoda kwabasebenzi namahora amade okusebenza ngezinye zezinto ezikhahlameze impilo yabahlengikazi emzimbeni nasengqondweni. Ababanga nesikhathi sokuzilela abalingani babo, kwadingeka benze izinqumo ezinzima. Kugqame ukudangala, ikakhulu lapho bekulandelwa khona inqubo ethi ‘Ungasivusi Isiguli’, kwadingeka babhekane nobuhlungu nosizi lokushiywa ngabalingani abaningi. Lokukuthinte indlela abahlengikazi abenza nabaziphatha ngayo emsebenzini. Njengoba asho u-Shaibu nabanye (ngowezi-2020) imigomo yokuziphatha ayicacisi kahle ukuthi kwenziwa njani uma umuntu ebhekene nesimo esiphuthumayo esibeka impilo engcupheni kepha ziyindlala izinto zokusebenza. Ngaphezu kwalokho abahlengikazi kudingeke ukuthi babhekane nokucwaswa wumphakathi nabanye abasebenzi bezempilo abebengabekiwe eminyangweni eneziguli ezelashelwa i-COVID-19.
Nokho kumqoka ukuqaphela ukuthi nakuba ubhubhane luthinte izindlela zezempilo kodwa ibe nomphumela omuhle ngasohlangothini lokwenza izinto ngezindlela ezintsha nangobuciko ukuqinisekisa imfundo yezobuhlengikazi nokuhlinzeka ngezidingo.
Ubhubhane luveze izinto eziningi ezidinga ukunakwa kwezokuhlenga. Phakathi kwazo kukhona ukubuyekeza iqhaza labahlengikazi emphakathini ekulweni nezinhlobo ezihlukene zobhubhane, ukubhekana nendaba yokuguga kwabahlengikazi nababelethisi nokuthi ukuqagula kweminyango yezabasebenzi akubafaki abahlengikazi abengeziwe ukubhekana nezimo eziphuthumayo zezempilo, okwenza ukuthi kubuyiswe abahlengikazi asebethathe umhlalaphansi. Kunesidingo sokutshala imali kwingqalasizinda yezobuchwepheshe ukweseka imfundo nomsebenzi wokuhlenga, ikakhulu ezindaweni ezisemakhaya. Ubhubhane i-COVID-19 luqhakambise isidingo sokuthi imfundo yobuhlengikazi isuswe eMnyangweni Wezempilo ukuqinisekisa ukuthi bonke abahlengikazi bayahlomula kubafundi bezemfundo ephakeme. Ubufakazi buveza ukuthi ukubuyekeza ukusetshenziswa kwezinto kuholele oshintshweni ezimalini ukuhlinzeka ezempilo, akwangabiwa mali ezimweni eziphuthumayo okuphazamise ukufundisa nokufunda.
Okokugcina, ubhubhane luqhakambise isidingo sokuqeqesha abaholi kwezobuhlengikazi nababelethisi ngokwezinhlelo zokubhekana nezimo eziphuthumayo.
Abesifazane Ababengabafundi Baxoxe Ngempumelelo Yabo
Imbokodo Ibinombukiso Wokupheka Bukhoma Ukugubha Inyanga Yabesifazane
Kugujwe Iminyaka Eyikhulu Yenhloko Yakwa-Bright
Umdidiyeli Womdanso Ovelele Ezweni u-Jay Pather Uyi-Legacy Artist kwiJOMBA!